င ဝန် န ဒီ: July 2009
လူဘီလူး အရိုးစုတွေ့ ရှိ...
ဒီကနေ့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စွဲဆိုထားတဲ့အမှု စီရင်ချက်ချမယ့်နေ့ပါ။ ဒီနေ့ကျင်းပမယ့် တရားခွင်ကို အမေရိကန်ဘက်က ကောင်စစ်ဝန်တဦးလည်း တက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ မနေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ ပုံမှန် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုဘက်က အထူးစောင့်ကြည့်နေတယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ အပြီးသတ် လျှောက်လဲချက်တင်တဲ့ တရားခွင်ကိုလည်း အမေရိကန် ကောင်စစ်ဝင်တဦး တက်ရောက်ခဲ့တယ်၊ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတဦးကလည်း ဒီအမှုနဲ့အတူ တရားခွင်မှာ ရင်ဆိုင်နေရတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂,၀၀၀ ကျော်ကို ချွင်းချက်မရှိ ချက်ချင်း ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ဆိုတဲ့ အမေရိကန်ဘက်က ရပ်တည်ချက်ကို လူသိရှင်ကြား တောက်လျှောက် ပြောနေခဲ့တာ ဖြစ်တယ်၊ မကြာခင်တုန်းကလည်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် (Hillary Clinton) က အာဆီယံ အစည်းအဝေးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ လိုတဲ့အကြောင်း ပြောထားခဲ့ပါတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အီယန် ကယ်လီ (Ian Kelly) က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် မြန်မာစစ်အစိုးရက စွဲဆိုထားတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကို ပြန်ရုပ်သိမ်းပြီး ချွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးဖို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြောထားပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ရုံးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးသန်းဆွေကို အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ နာရီပိုင်းက ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ သူတို့တွေ ဘာအကြောင်း ပြောဆိုသလဲတော့ မသိရသေးပါဘူး။
နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှု သောကြာနေ့ စီရင်ချက်ချမည်
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် တားမြစ်မိန့်ကို ဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုပြီး ရုံးတင် တရားစွဲဆိုနေတဲ့ အမှုအတွက် နောက်ဆုံးစီရင်ချက်ကို လာမယ့် သောကြာနေ့ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့မှာ ချမှတ်မယ်လို့ တရားသူကြီးက ကြေညာထားပါတယ်။ အပြည့်အစုံ ကိုကျော်ကျော်သိန်းရဲ့ သတင်းပေးပို့ချက်ကို ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
ဗွီအိုအေ မှကူးယူဖေါ်ပြသည်။ ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:44 AM No comments:
.ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဌာန (လ၀က) က တပတ်ခန့် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ထားခဲ့သော မြန်မာ ကလေးငယ် တဦးကို ယမန်နေ့က ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သည် ဟု Bangkok Post သတင်းစာတွင် ရေးသား ထားသည်။
.ပြည်ပမှ ဝင်ရောက်လာသော စားသုံးဆီများကို စစ်အစိုးရက စားသုံးရန် မသင့်ဟုဆိုကာ ရောင်းချခြင်း၊ စားသုံးခြင်း မပြုရန် တားမြစ်လိုက် ခြင်းကြောင့် ယင်းအမှတ် တံဆိပ်များ ရောင်းချ လျက်ရှိသော ဆီကုန်သည်များ အခက်အခဲဖြစ်နေရကြောင်း ကြားသိရသည်။
ဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းချနေသော ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် စားသုံးဆီများအနက် အမှတ်တံဆိပ် ၄ ခုကို စားသုံးရန်မသင့်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဇူလိုင် ၂၅ ရက်ထုတ် စစ်အစိုးရပိုင် သတင်းစာများတွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“ဒီလို စားသုံးရန်မသင့်ဘူး ဆိုပြီးသာ ခဏခဏကြေညာနေတယ်။ ရောင်းတဲ့သူကရောင်း၊ စားတဲ့သူက စား နေတာပဲ။ အခုလည်း ရေသန့်တွေကို စစ်နေပြန်ပြီ၊ လုပ်ငန်းဘယ်နှခုလောက် နားရဦးမလဲမသိဘူး” ဟု ရန်ကုန် မြို့ခံတဦးက ဆိုသည်။
ဈေးကွက်များတွင် ရောင်းချလျက်ရှိသော စားသုံးဆီများကို ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ရာ ပြည်ပမှ တင်သွင်းသော အမှတ်တံဆိပ် ၄ ခုတွင် စားသုံးဆီသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသဖြင့် စားသုံးရန်မသင့်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဗဟိုအစားအသောက်နှင့်် ဆေးဝါး စီမံကွပ်ကဲရေး အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ တဦးကပြောသည်။
ယင်းတံဆိပ်လေးခုမှာ မလေးရှားနိုင်ငံထုတ် ကျောက်ပုစွန်နှစ်ကောင် (Star Oil ကြယ်နီပုံ) အမှတ်တံဆိပ် (၁၈ လီတာဝင် အဝါရောင်ပလတ်စတစ်ပုံး)၊ ကျောက်ပုစွန်တကောင်အမှတ်တံဆိပ် (၁၈လီတာဝင် အဝါရောင် ပလတ်စတစ်ပုံး)၊ ရေနဂါး (Twin Sea Horse) အမှတ်တံဆိပ် (၁၈လီတာဝင် အဝါရောင်ပလတ်စတစ်ပုံး) နှင့် Manufactured by, A1 Energy company Limited.ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ငါးကြော် (Pamola Brand) အမှတ် တံဆိပ် များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ရောင်းချခြင်းမပြုရန် လိုက်လံအသိပေး လျက်ရှိကြောင်း ညောင်ပင်လေးဈေး ပလာဇာရှိ စားသုံးဆီ ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်မှ အရောင်းဝန်ထမ်းတဦးက ဧရာဝတီကိုပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လများက လက်ဖက်များတွင် ဆိုးဆေးပါသဖြင့် စားသုံရန်မသင့် ဟုဆိုကာ တားမြစ်ခဲ့ သော်လည်း ယခုရက်ပိုင်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချခွင့်ပြုခဲ့သည်။
မေလ နှင့် ဇွန်လ ကလည်း ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး ဆိုးဆေး အသုံးပြုထားသည့် ငါးပိ တံဆိပ် ၇၉ မျိုး၊ ငရုတ်သီးမှုန့် တံဆိပ် ၆ မျိုး၊ ပဲနီလေး တံဆိပ် ၁ မျိုး၊ ယိုစုံ (အချဉ်ထုပ်) တံဆိပ် ၁ မျိုး တို့ကို ပိတ်ပင်ကြောင်း ကျန်းမာရေး ဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မန္တလေးမြို့ထုတ် ငရုတ်သီးမှုန့်နှင့် ငါးပိ အမှတ်တံဆိပ် ၂၈ ခုတွင် အန္တရာယ်ကြီးသည့် ဓာတုဗေဒ ဆိုးဆေး ပါဝင်နေသဖြင့် စားသုံးရန် မသင့်ကြောင်း ယခုလ ၁၃ရက်နေ့ ကကြေညာခဲ့သည်။
Money and the Taliban
CNN's Ralitsa Vassileva speaks to the author of 'Seeds of Terror' about how money moves through insurgent networks.
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:34 AM No comments:
Hitachi Digital TV အားသာချက်တချို့ 
Hitachi Digital TV အထူ၃၅ မီလီမီတာ ...အရုပ်ကြည်လင် ပြတ်သားလာသည်....TV ကြည့်နေစဉ် ...... မိမိ မြို့ နယ် စာတိုက်သေတ္တာနံပါတ် အလိုက် ရာသီဥတု ...ဒေါ်လာ နှင့် ယန်း ငွေ နူန်း ထား များကိုကြည့်နိူင် ပြီး....
BS..CS ပါတပါတည်း ပါရှိသည်....တစ်နေ့ တာအချိန် ဇယား ကို ကြိုတင်သိနိူင်ပြီး မိမိအိမ်တွင် မရှိသော်လည်းလိုအပ်သည့်အစီအစဉ်ကို ဖမ်းယူထားနိူင်သည်....ကြည့်နေစဉ် ချက်ချင်း လည်း ဖမ်းယူထားနိူင်သည်...ပရိုဂရမ် ဖမ်းယူပြီး ခြင်း mail ပို့ သည်ကိုဖတ်ရူနိူင် သည်....သို့ သော် computer Digital TV ကဲ့သို့ ဖမ်းယူနေသည့် အစီအစဉ် မှလွှဲ၍ တစ်ခြားအစီအစဉ် ကြည့်ရူမရနိူင်သေး....
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:34 AM No comments:
၂၁ ဇူလိုင် ၂၀၀၉
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးရုံးမှ ဒု-ရဲအုပ်တဦးက “ရုံးက လူကြီးတွေ ကျနော်တို့ကို ပြောတာကတော့ နေပြည်တော်က တပ်မတော် အရာရှိတချို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတာ ရှိတယ်။ တချို့ ရိုးရိုးသာမန်ပတ်စ်ပို့လုပ်ပြီး ရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေပဲ နိုင်ငံခြား ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒီအထဲမှာ ယူကရိန်းက နျူကလီးယား သိပ္ပံပညာ လေ့လာခဲ့တဲ့ အရာရှိငယ် တယောက်လည်း ပါသွားတယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒါကြောင့် အသည်းအသန် ခုလို နေပြည်တော်က အထူးအဖွဲ့ ဆင်းလာပြီး ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတာလို့ သိရတယ်” ဟု ပြောသည်။
နေပြည်တော်မှ တပ်မတော်အရာထမ်းအချို့ တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ “ပြီးခဲ့တဲ့တလလောက်တုန်းက နေပြည်တော် စစ်ရုံးချုပ်က တပ်ကြပ်ကြီးစာရေးအဆင့် စုစုပေါင်း (၁၁) ဦး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတယ်လို့ သိရတယ်။ တချို့က ခွင့်နဲ့သွားပြီး ပြန်မလာတာရှိသလို တချို့ကတော့ ပျဉ်းမနားဘက်ကို အားလပ်ချိန် ထွက်သွားပြီး ပြန်မလာတော့တာ။ သူတို့ထဲမှာ ရုရှားပြန်တချို့လည်း ပါတယ်လို့ သိရတယ်” ဟု နေပြည်တော် စစ်ရုံးချုပ်နှင့်နီးစပ်သည့် တပ်မတော်အရာရှိဟောင်း တဦးက ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။
ထွက်ပြေးသွားသည့် တပ်မတော်အရာထမ်းများ၏ မိဘ၊ ဆွေမျိုး နေအိမ်များကို ၀င်ရောက်စစ်ဆေးမှုများ လုပ်ခဲ့သော်လည်း ထူးခြားသည်ဟု မကြားသိရကြောင်း၊ ရန်ကုန် ပတ်စ်ပို့ရုံးကို နေပြည်တော်က အထူးအဖွဲ့ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးနေခြင်းသည် ယင်းတပ်မတော်သားများ ထွက်ပြေးမှုနှင့် ဆက်စပ်နိုင်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
“အခုလို ထွက်ပြေးသွားတဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးစာရေးအဆင့် တပ်မတော်သားတွေထဲမှာ တပ်မတော်မှတ်တမ်းရုံးကလည်း ပါတာကြောင့် လောလောဆယ် အင်တာနက်နဲ့ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေမှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းရဲ့ မြောက်ကိုရီးယား လျှို့ဝှက်ခရီးစဉ်မှတ်တမ်း၊ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးရဲ့ ရုရှားခရီးစဉ်မှတ်တမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့ အိန္ဒိယ ခရီးစဉ်မှတ်တမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ဌေးဦးရဲ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း စတာတွေဟာ သူတို့ဖြန့်ဖြူးတာဖြစ်နိုင်တယ်” ဟု အဆိုပါ တပ်မတော်အရာရှိဟောင်းတဦးက သုံးသပ်သည်။
ရန်ကုန် ပန်းဆိုးတန်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးရုံးသည် တနိုင်ငံလုံးမှ ပြည်သူများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ တပ်မတော်သားများ၊ သံတမန်များအား ပတ်စ်ပို့ထုတ်ပေးသည့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ အများဆုံး ရုံးတရုံးဖြစ်ပြီး တာဝန်ကျရဲနှင့် လဝက ဝန်ထမ်းများ ဝင်ငွေအဖြောင့်ဆုံး ရုံးလည်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ နအဖစစ်အစိုးရက အခက်အခဲပေါင်းစုံ ဖန်တီးထားသည့်အတွက် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများ ပေါ်ပေါက်နေခြင်းဖြစ်ပြီး ငွေတတ်နိုင်သူ မည်သူမဆို မှတ်ပုံတင်အတု၊ သန်းခေါင်စာရင်းအတု စသည်များပြုလုပ်နိုင်ကာ တရားဝင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တခုအထိ ပြုလုပ်နိုင်သည်ဟု မြို့ခံများက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ နေပြည်တော်အထူးအဖွဲ့၏ စစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုများသည် မကြာခင် မြို့နယ်အဆင့် လဝကရုံးများနှင့် ပြည်တွင်းအခွန် ဦးစီးဌာနရုံးများအထိ ပျံ့နှံ့သွားနိုင်သည်ဟု ၀န်ထမ်းများက ပြောဆိုနေကြသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:25 AM No comments:
Credit Card နှင့် ATM မြန်မာပြည်မှာ တကယ် သုံးလို့ ရတော့မှာလား...
မြန်မာပြည်မှာ Credit Card ကို အသုံးမပြုခင် ATM ကဒ် ကို အမှန်တကယ် အစိုးရ ဘဏ် မှာသုံးလို့ ရရင် ကောင်း မယ်....၂၄ နာရီ သုံး လို့ ရရင် မြန်မာပြည် တိုးတက် လာမှာ အမှန်ပဲ....
Credit Card က ATM သုံး ပြီးငွေများများ သုံးလို့ ဘဏ်ကအတိုး ရ ဖို့ယုံကြည်လို့ ထပ်ထုတ်ပေးတာ...ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်...Credit Card နှင့် ATM မြန်မာပြည်မှာ တကယ် သုံးလို့ ရရင်ဝမ်းသာစရာပါ....
ှစင်ကာပူမှာ က ၂၄နာရီ ATM သုံးလို့ ရတယ်.....ဒါပေမဲ့....ဘဏ်မှာ ဒေါ်လာ၅၀၀ကျော်..ဒေါ်လာ၁၀၀၀ကျော် မှ မကျော် ရင်တစ်လ ၂ဒေါ်လာ ဖြတ်တယ်....
ဂျပန်မှာက ဂင်ဇာ မှာ တချို့ နေရာ မှာ ၂၄နာရီ ရတယ်...ညဘက်မှာ ၁၀၅ ယန်း....၂၄နာရီဆိုင်မှာဆို...၂၁၀ ယန်း ဖြတ်တယ်....
Posted by ငဝန်နဒီ at 1:11 AM No comments:
Credit Card ဆိုလို့မြန်မာမေဖလားဝါး ATM ကဒ်ခဏပဲသုံးလိုက်ရတယ်...
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:58 AM No comments:
Saturday, 25 July 2009 15:58 အေးချမ်းမြေ့ .မြန်မာနိုင်ငံတွင် အွန်လိုင်း စီးပွားရေးစနစ် (e – commerce) စတင်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကွန်ပျူတာ အသင်း၌ လွန်ခဲ့သည့် အပတ်က ကျင်းပသည့် ဟောပြောပွဲတွင် ဘဏ်အရာရှိ တဦးက ပြောသည်။
“မကြာခင်မှာ အွန်လိုင်း ငွေပေးချေရေးစနစ် စတင်နိုင်ပါတော့မယ်။ အခုလည်း အစိုးရနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ် ကွန်ယက် စနစ် (Banking network) တည်ဆောက်နေပါတယ်”ဟု ယင်း ဟောပြောပွဲတွင် မြဝတီဘဏ် လီမိတက်၏ ဒုတိယ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဒေါ်မြတ်စန္ဒာကျော်က ပြောကြားလိုက်သည်။
ကွန်ပျူတာအသင်းတွင် ကျင်းပသည့်e– commerce ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲ (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
မြဝတီဘဏ်တွင် ယခုအခါ Semi-online banking operation စနစ်များ စတင်စမ်းသပ်ရန် ကြိုးစား နေပြီ ဟုလည်း ၎င်းက ဆက်ပြောသွား ကြောင်း သိရသည်။
သို့ရာတွင် ကွန်ပျူတာပညာရှင်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက အွန်လိုင်းငွေပေးချေရေးစနစ် စတင်ရန် မလွယ်ကူနိုင်သေးဟု ပြောဆိုနေကြသည်။
အတည်မပြုနိုင်သေးသည့် သတင်းများအရ မြဝတီဘဏ်နှင့် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်တို့က ပြည်တွင်း၌ Credit Card (အကြွေးဝယ်ကတ်) အသုံးပြုနိုင်မည့် စနစ်ကို စတင်စမ်းသပ်နေပြီး ၎င်းကတ်ကို နိုင်ငံတကာတွင် အသုံးပြု နိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် Semi-online banking operation ဟု အမည်ပေးထားကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်သည့် ဦးဇော်ထွဋ်ကမူ“ကျနော်တို့အနေနဲ့ ပြောရရင် အွန်လိုင်းငွေပေးချေရေးစနစ်အတွက် နည်းပညာ လုံခြုံမှု အာမခံချက်တွေ မပေးနိုင်သေးပါဘူး”ဟု ပြောသည်။
မြန်မာပြည်တွင် အွန်လိုင်းစီးပွားရေးစနစ် စတင်နိုင်ရန် Credit Card များ အသုံးမပြုနိုင်မီ ပထမဦးစွာ မိုဘိုင်း ဖုန်းများအသုံးပြု၍ ငွေပေးချေခြင်း (Tele - payment) စနစ်ကိုစမ်းသပ်မည်ဟုလည်း ဦးဇော်ထွဋ်က ဆိုသည်။
ထိုသို့ မိုဘိုင်းဖုန်းများအသုံးပြုကာ ငွေပေးချေရာတွင် ဖုန်း ဘီလ်ပေးပို့သကဲ့သို့ ဝယ်ယူထားသည့် ပစ္စည်းတန်ဖိုး ဘီလ်များကို မြဝတီဘဏ်မှတဆင့် ကောက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
“Hot line တခုထားပြီး ဝယ်ယူတဲ့ပစ္စည်းအတွက် ငွေ ချေဖို့ သဘောတူမတူ မေးမြန်းမယ်။ သဘောတူတယ် ဆိုရင် ဖုန်းဘီလ် ပို့သလိုပဲ ဝယ်ယူထားတဲ့ပစ္စည်းအတွက် စလစ် ပို့ပေးမယ်” ဟု ဦးဇော်ထွဋ်က ပြောခဲ့သည်။
ထိုသို့ အွန်လိုင်း စီးပွားရေးစနစ် စတင်နိုင်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့နေမှုမှ အတိုင်းအတာ တခုအထိ တွန်းလှန် နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ဦးဇော်ထွဋ်က ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
“ဒီစနစ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရင် တဆင့်ခံမဟုတ်တော့ဘဲ ရောင်းတဲ့၊ ဝယ်တဲ့သူအချင်းချင်း တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာကို အထိုက်အလျှောက် ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လောလော ဆယ် အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေ ထဲမှာ စမ်းသပ်ကြည့်ပြီးမှ တကမ္ဘာလုံးအဆင့်အထိ သွားဖို့ ကြိုးစားပါမယ်” ဟုသူကဆက်ပြောခဲ့သည်။
အွန်လိုင်း စီးပွားရေးစနစ် ဟောပြောပွဲသို့ တက်ရောက်လာသည့် စီးပွားရေးသမား အများစုကမူ မိုဘိုင်းဖုန်း သုံး၍ ငွေချေရာတွင် ငွေပမာဏတခုကို သတ်မှတ်သင့်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့ထံ ပြန်လည်ပေးပို့လာသည့် စလစ်နံပါတ် များနှင့် ပစ္စည်းစာရင်းကို ပြန်လည်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန် အချိန်ပေးသင့်ကြောင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးကြသည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းတွင် ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင် ၁၈ ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော အဆိုပါဟောပြောပွဲ၌ အွန်လိုင်း စီးပွားရေးစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ဝန်ကြီးဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူ အများ အပြားနှင့် ကွန်ပျူတာပညာရှင်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရောက်ကြောင်း ၎င်းပွဲသို့ တက်ခဲ့သည့် လေ့လာသူ တဦးက ဆိုသည်။
၎င်းဟောပြောပွဲသည် ယခင် နည်းပညာဟောပြောပွဲ များနှင့် မတူဘဲ နိုင်ငံတော်အဆင့် နေပြည်တော်မှ ကျင်းပခိုင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကွန်ပျူတာအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ် အကြံပေးတဦးဖြစ်သူ Myanmar Credent Technology မှ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးဇော်နိုင် ကလည်း “ပြောင်းလဲတော့မှာပါ။ ပြောင်းလဲရင် အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်တယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်း ရေးဆုရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သဘောထား.....ဦးကြည်ဝင်းပြောတဲ့ဗွီဒီယို
မိုဘိုင်းက Terror ဗွီဒီယို
ဂျပန်ကားဟောင်းများ မြန်မာပြည် တင်သွင်းမှုပိုမိုများ
နအဖနှင့်နီးစပ်သည့်ကုမ္ပဏီတခုကို ကားလေလံတင် ရောင်းချခွင့်ပြုလိုက်သောကြောင့် မဲဆောက်-မြ၀တီမှတဆင့် ရန်ကုန်သို့ ဂျပန်ကားဟောင်းများ တရားမ၀င်တင်ပို့နေမှု ပိုမိုမြင့်တက်လာနေကြောင်း ကားကုန်သည်များက ပြောသည်။
“အရင်ကဆိုရင် တရက်ခြား ကားတန်းအဆင်းမှာ မြ၀တီကနေ ရန်ကုန်ကို သယ်တဲ့ကားတွေဟာ အများဆုံး (၁၀) စီး၊ (၁၅) စီးပဲ။ အခုဆိုရင် တရက်ခြား အစီး (၃၀) လောက်ရှိတယ်” ဟု ကားသယ်ပို့ပေးသူ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တခုမှ ယဉ်မောင်းတဦးက ပြောသည်။
ယခုတင်သွင်းသည့်ကားများမှာ ဂျပန်မှတဆင့် ဘန်ကောက်ဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိလာသည့်ကားများဖြစ်ပြီး ဘန်ကောက်မှ တဆင့် နယ်စပ် မဲဆောက်မြို့ကမ်းနားရှိ အမှတ် (၁၇) ဂိတ်၊ (၁၀) ဂိတ်၊ (၁၃) ဂိတ်နှင့် ထာ့အာဂိတ်များမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ မြ၀တီသို့ တင်သွင်းကြခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့မှ ကားကုန်သည်တဦးက “ဒီနှစ်လ၊ သုံးလအတွင်းမှာ ကားတွေ ထက်ဝက်နီးပါး ပိုသွင်းကြတာက အစိုးရက သူနဲ့ နီးစပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတခုကို ကားရောင်းချခွင့်ပေးတာနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်တယ်လို့ သိရတယ်။ နောက်ထပ် ကုမ္ပဏီတွေကိုလည်း ဒီလုပ်ငန်းတွေ ချပေးဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒါကြောင့် ကားသွင်းတဲ့လူတွေ အလုပ်ဖြစ်နေကြတယ်” ဟု ပြောသည်။
ထိုင်းဘက်ကမ်းမှ မြ၀တီသို့ ကားတစီးတင်သွင်းရာတွင် မဲဆောက် ထိုင်းအကောက်ခွန်ဌာနအား ဘတ် (၆) ထောင်၊ မော်တော်ကား မြန်မာဘက်ကူးခ ဘတ် (၃) ထောင်၊ မြ၀တီဘက်ခြမ်းရှိ မြန်မာအာဏာပိုင်များအတွက် ဘတ် (၃) ထောင် ပေးရသည်ဟု ကုန်သည်များက ပြောသည်။
အဆိုပါကားများကို ဒီကေဘီအေအဖွဲ့၊ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့၊ စစ်တပ်နှင့်ရဲတို့က မြ၀တီမှ ရန်ကုန်မြို့သို့ သယ်ဆောင်ပေးကြပြီး ကားအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ၎င်းတို့အား ကျပ်သိန်း (၂၀) မှ (၂၅) အထိ ယာဉ်ပိုင်ရှင်များက ပေးရသည်။
လတ်တလောတင်သွင်းနေသည့်ကားများမှာ တိုရိုတာ (TOYOTA) အမျိုးအစားနှင့် အခြားအမျိုးအစားများဖြစ်ပြီး ထိုကားများကို ဆယ်ဘီးတပ် ကားသယ်ယာဉ်များဖြင့် သယ်ဆောင်ကြသည်။ ဆယ်ဘီးတပ်ကားကြီး တစီးလျှင် အနည်းဆုံး ကား (၆) စီးခန့် တင်ကာ ဘန်ကောက်မှ မဲဆောက်ကမ်းနားအထိ လာရောက်ပို့ဆောင်ပေးသည်။
အဆိုပါလမ်းကြောအတိုင်း မော်တော်ကားများအပြင် မြေတူးစက်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးသုံးယာဉ်များ၊ ဂျပန်နှင့် ကိုရီယား နိုင်ငံတို့မှ ကုန်သေတ္တာများဖြင့် တင်သွင်းသည့် စက်ဘီးအဟောင်းများကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်သို့ သယ်ယူကြသည်။
.....ဟာသ များမှာ....ဒူးယားဆောင်...စီဆောင်...ရန်ကုန်စက်မူတက္ကသိုလ်....များမှ...အမှန်တကယ်ဖြစ်သဖြင့်သူငယ်ချင်း များ ပြုံးပျော် နိုင်ကြပါစေ......
ဒူးယားဆောင်...စီဆောင်...ရန်ကုန်စက်မူတက္ကသိုလ် သို့ အမှတ်တရ....
Posted by ငဝန်နဒီ at 1:53 PM No comments:
၁၉၉၃ ဒူးယားဆောင် ညချမ်းလေးမှာပေါ့....
........အဆောင် ကျောင်းသားတစ်စု တို့ 
.....ဂစ်တာတီး ပြီး ....အဆိုတော်ဂျက်မြသောင်း သီချင်း ....စိုးရိမ်မိတယ်ဖြိုးရယ်....သီကြူးနေစဉ်....
ထိုစဉ် ကျွန်တော်က အခန်းခဏပြန်အဝင်..........
သို့ သော် .....ဒိုက်ဦးသား...လတ်ကြီး က ဂစ်တာတီးကောင်းဆဲ.....
တော်တော့... ကိုယ်အခန်းကိုပြန် .....စာကျက်ကြ..
စာကလေး နဲ့ ရေမွှေး
၁၉၉၃ ခုနှစ် ဒူးယားဆောင် နံနက် ခင်း မှာ စာကလေး တစ်ယောက် သူချစ် သူ နဲ့ တွေ ဖို့ရေ မွှေး ဆွှတ် ပြီး သွား ဖို့ပြင် စဉ် သူငယ် ချင်း များ က ပိုမိုဆွှတ် ပေး သဖြင့် .....
...ဟာ... အ ချိန်နီး နေ ပြီ....
အရမ်းမွှေး ကြိုင် နေ သဖြင့်...အင်္ကျီ ပြန် လဲ စဉ်
...သာယာဝတီ သား က...
ဆံပင် ကို ရေ မွှေး ဆွှတ်ပေး လိုက် သော် အခါ..
...ရေချုိးရန် အချိန် က မရှိ...
စာကလေး တစ်ယောက် သူချစ် သူ ထံ သို့မွှေး ကြိုင် စွာဖြင့် သွားရလေသည်......
စာကလေး တစ်ယောက် ရေ မွှေး အရမ်း ကြိုက် ကြောင်းသူချစ် သူ ....သိမှာ အသေအချာ ပင်။ ။
(သူငယ်ချင်း များကို စိတ်မဆိုးတတ် သော စာကလေး သို့ )
စားအုန်းဆီကို မလေးရှားက သွင်းနေတာ ဦးပိုင်ကပါ။အဆိပ်သင့်အောင် ဘာဖြစ်လို့ ဆပ်ပြာမှုန့်တွေ ရောရတာပါလည်း။
စားအုန်းဆီထဲတွင် ဆပ်ပြာမှုန့်တွေရောကာ မခဲအောင်လုပ်ပြီး ရောင်းချနေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အီလန်ဆပ်ပြာမှုန့်က
ဈေးပေါတော့ စားအုန်းဆီ တစ်ပီပါ (၄၂) ဂါလံကို အီလန်တစ်ထုပ် (၂၀၀ ဂရမ်) ထည့်တယ်လို့ ကြားရပါတယ်။
“ဆီကို ရေချိုး ဆေးရိုး မီးလှုံ ကောက်ရိုးတောင်လိုပုံ” ဆိုတဲ့ စကားပုံကို အမြတ်တနိုး ရွတ်တတ်တဲ့ ဗမာလူမျိုးဟာ
ဆီစားကြတာ ကြမ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်တွင်းမှာ ဆီပေါလို့လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မပေါတော့တာ ကြာလှပါပြီ။
မြန်မာတိုင်းမ်ရဲ့ အဆိုအရ ဗမာတယောက်ဟာ တနှစ်ကို စားသုံးဆီ (၅) ပိဿာနဲ့ (၄၉) ကျပ်သား စားသုံးပါတယ်။ လူဦးရေ
(၅၂) သန်းနဲ့ တွက်မယ်ဆို တနှစ်ကို ပိဿာပေါင်း (၂၈၅) သန်း၊ တန်အားဖြင့် (၄) သိန်း စားသုံးပါတယ်။
ဆီအဖြစ် ပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ စားအုန်းဆီတို့ကို အဓိက အသုံးပြုရာမှာ ပြည်တွင်းမှာ စားဆီ ၅၀%လောက်ပဲ ထွက်ပြီး
ကျန်တဲ့တ၀က်ကို ပြည်ပက တင်သွင်းရပါတယ်။
အဓိက တင်သွင်းတဲ့ နိုင်ငံက မလေးရှားဖြစ်ပြီး သွင်းတဲ့ဆီအမျိုးအစားက စားအုန်းဆီ ဖြစ်ပါတယ်။ တနှစ်ကို တန်ချိန် (၂)
သိန်း တင်သွင်းပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ တနင်္သာရီတိုင်းမှာ ဧက (၂) သိန်းလောက် စိုက်ဖို့ လျာထားတာ (၁) သိန်းလောက်ပဲ
စိုက်နိုင်သေးတယ်လို့ ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက ပြီးခဲ့တဲ့လက ရေးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာတိုင်းမ်က ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ဧက (၇) သောင်းလောက်ပဲ စိုက်နိုင်သေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာတိုင်းမ်အဆိုက အမှန်နဲ့ ပိုနီးစပ်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (၁) ဧကကို (၂.၅) တန်ထွက်ရင် ဧက (၇) သောင်းကို တန်ချိန် (၁) သိန်း (၇) သောင်းခွဲ
ထွက်ပါတယ်။ မလေးရှားက တနှစ်ကို စားအုန်းဆီ တန် (၂) သိန်း တင်သွင်းတယ်ဆိုတော့ ပြည်တွင်းမှာ စားအုန်းဆီ နှစ်စဉ်
တန်ပေါင်း (၃) သိန်း (၇) သောင်းခွဲ စားနေပါတယ်။ ဆင်ဟွာက ပြောတာယူရင် နှစ်စဉ်စားတဲ့ဆီက စားအုန်းဆီချည်းပဲ တန်
(၄) သိန်းခွဲ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
တနှစ်ကို စားအုန်းဆီ တန် (၃) သိန်း (၇) သောင်းခွဲ စားတယ်ဆိုတော့ လိုတဲ့ တန် (၂) သောင်းခွဲက ပဲဆီနဲ့
နှမ်းဆီဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ နေကြာဆီ နည်းနည်းပါနိုင်ပါတယ်။
ချုပ်လိုက်ရင် စားအုန်းဆီတွေ ပြည်တွင်းမှာ လှိုင်ဘောလယ်နေပါတယ်။ တန် (၃) သိန်း (၇) သောင်းခွဲကို လူဦးရေ (၅၂)
သန်းနဲ့စားရင် လူတယောက်ဟာ တနှစ်ကို စားအုန်းဆီ (၅) ပိဿာနဲ့ (၁၅) ကျပ်သား စားသုံးပါတယ်။
စားအုန်းဆီက ဒီတိုင်းထားရင်း ခဲတယ် ဆိုတာ လူတော်တော်များများ သိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အခဲဖြစ်တဲ့ အပူချိန်က မြင့်ပါတယ်။
(၃၁) နဲ့ (၄၁) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ကြားမှာ အခဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာပြည်မှာ အောက်ပြည်အောက်ရွာနဲ့ အညာမှာ တနှစ်လုံး
ပျမ်းမျှအပူချိန်က (၃၀) ဒီဂရီနဲ့ အထက်မှာ ရှိတာဆိုတော့ စားအုန်းဆီခဲဖို့ လွယ်တဲ့နေရာပါ။
စားအုန်းဆီခဲရင် ပျော်သွားအောင် တနေ့ကို နည်းနည်းချင်းစီ အပူပေးရပါတယ်။ အပူသိပ်ပြင်းရင် ဆီထဲက
အဆီတွေပျက်သွားလို့ အနံ့ဆိုးသွားပါတယ်။ ဒီတော့ စားအုန်းဆီကို ထိန်းသိမ်းရတာ ခက်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ရောင်းတ့လဲူတေကွ အလွယ်လိုက်ပြီး အဆီတွေပျော်အောင် ဆပ်ပြာမှုန့်ရောလိုက်ပုံ ရပါတယ်။
ဆပ်ပြာမှုန့်သွေးလမ်းကြောင်းထဲရောက်သွားရင် သွေးထဲမှာ အက်ဆစ်ပမာဏများလာတာ၊
အစာလမ်းကြောင်းပေါက်ကုန်တာ၊ အသက်ရှုကျပ်တာ၊ သွေးဖိအားကျတာ၊ လည်ချောင်းယောင်လာတာ၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက
(၂၀၀၉) ခုနှစ် ဇွန်လ ကမ္ဘာ့စားAုန်းဆီပေါက်ဈေးနဲ့ တွက်မယ်ဆိုရင် စားအုန်းဆီ တစ်တန်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇၁၄)
ဒေါ်လာ ပေါက်ပါတယ်။ ပိဿာနဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆို တစ်ပိဿာကို (၉၉) ဆင့်ပဲ ကျပါတယ်။ တစ်ဒေါ်လာပဲ ထားပါတော့။
ဗမာငွေနဲ့ဆို ကျပ် (၁၁၀၀) မပြည့်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်မှာ စားအုန်းဆီ တပိဿာ ကျပ် (၂၁၀၀) ၊ မန္တလေးမှာ ကျပ် (၁၉၁၀) ၊ တောင်ကြီးမှာ ကျပ် (၂၁၀၀) နဲ့
စစ်တွေမှာ ကျပ် (၂၂၀၀) ပေါက်ပါတယ်။ စစ်တွေက လူတွေက စားအုန်းဆီကို ကမ္ဘာ့ပေါက်ဈေးထက် ၂ဆပိုပေးပြီး
စားအုန်းဆီကို မလေးရှားက သွင်းနေတာ ဦးပိုင်ကပါ။ လက်ကား၊ လက်လီအဆင့်ဆင့်ဖြတ်ပြီး
တကယ်စားတဲ့လူဆီရောက်တော့ သွင်းဈေးရဲ့ နှစ်ဆဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဈေးကြီးတာက ထားတော့။ လူတွေ
အဆိပ်သင့်အောင် ဘာဖြစ်လို့ ဆပ်ပြာမှုန့်တွေ ရောရတာပါလည်း။
စားသုံးသူက ဘာအခွင့်အရေးမှ မရှိတာ ကြာနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အသက်ကို အန္တရာယ်ပြုနေတဲ့လူတွေကို
တရားစွဲလို့ရတဲ့ ဥပဒေရှိတာကို သုံးရမယ့် အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ တရုတ်ပြည်မှာတောင် နို့မှုန့်ထဲ
မယ်လမင်းရောတ့လဲူတေကွို သေဒဏ်ပေးလိုက်ပါပြီ။
ဗမာပြည်မှာ စားသုံးသူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို တောင်းဆိုတဲ့ အဖွဲ့တွေ ရှိဖို့လိုနေပါပြီ။ ဥပဒေပညာရှင်တွေ၊
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ စားသုံးသူတေကွိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီး အစားအစာတွေကို အဆိပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ လူတွေကို
တရားစွဲရမယ့် အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ တနှစ်ကို အဆိပ်ရည် (၅) ပိဿာ သိသိကြီးနဲ့ တိုက်နေတာကို ချက်ချင်းရပ်သင့်ပါပြီ။
(ပေးပို့ လာသူ မိတ်ဆွေတစ်ဦးအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်)။
Posted by ငဝန်နဒီ at 1:13 AM No comments:
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ လွတ်လပ်ရေး ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ဖြစ်ကြသည့် သခင်မြ၊ ဦးဘဝင်း၊ မန်းဘခိုင်၊ ဦးရာဇတ်၊ စပ်စံထွန်း၊ ဒီးဒုတ်ဦးဘချို၊ ဦးအုန်းမောင် စသည့် ဝန်ကြီး (၇) ဦး အပါအဝင် သက်တော်စောင့် ရဲဘော်ကိုထွေးတို့သည်
၁၉၄၇ ခု ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ မနက် ၁ဝနာရီ ၃၇ မိနစ်တွင် နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက် ဂဠုန်ဦးစော၏ ခိုင်းစေချက်ဖြင့် လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ကြရသည်။
ခေတ်ပြိုင် မှ ကူး ယူဖေါ်ပြသည်။ ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 5:12 AM No comments:
10 climbers have died on two mountains in northern Japan, police said Friday
Eight climbers who died on Mount Tomuraushi were in tourist group
Except fora32-year-old survivor, all the climbers were in their late 60s
updated3hours, 54 minutes agoNext Article in World »
(CNN) -- Ten climbers have died on two mountains in northern Japan, police said Friday.
Hokkaido's mountains and scenery areabig drawcard for climbers and tourists.
Eight of the climbers who died on Mount Tomuraushi were inagroup organized byatourist company, according to Yuji Kikuchi,aspokesman for Hokkaido police. A ninth man was climbing alone.
One more climber died on Mount Biei, Kikuchi said.
Another 10 people survived on both mountains in Hokkaido, according to Kikuchi.
Except fora32-year-old survivor, all the climbers were in their late 60s, the spokesman said.
The cause of their deaths was not available.
The area has experienced heavy rain and gusty winds in the past two weeks due toapersistent area of low pressure, CNN's meteorologist Jennifer Delgado said.
The storm system has also brought flooding to North and South Korea, she added.
.ငွေကြေးမပြေလည်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များပြားမှုကြောင့် တက္ကသိုလ် တက်ရောက်နေသည့် ကျောင်းသားထက်ဝက်ခန့် ကျောင်းတက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့သည့် အခြေအနေ ကြုံတွေ့နေရသည်။
Ruili (Mizzima) – According to residents, local authorities in conjunction withatravel agent are issuing Burmese passports, valid for three years, from the northern Shan State town of Muse.
The Rangoon-based Maha Toe Travel Agency accepted passport applications in the first week of July, the first such operation ever witnessed in the Sino-Burma border town of Muse.
“The first phase of issuing passports has finished. They said they will conduct the processasecond time and told us to register with them for an application. But they didn’t say when the next round will take place,” according toalocal resident from Muse who applied forapassport.
A merchant living in Muse added, “The passports were issued at the SB (Police Special Branch) office in association withatravel agent."
Many Burmese of Chinese descent who work in the Chinese border town of Ruili are reportedly among the over 300 passport applicants from earlier this month.
One local resident remarked, “It costs 100,000 kyats [$US 90] to get this passport. Plus, we have to pay 30,000 kyats for Passport Form 17 and have to wait one month to receive our passports in our hands. It will be good for three years."
If successful in their application, passport holders can then officially travel as tourists to foreign countries.
Yet, the passport will expire afteraperiod of only one year if the holder does not journey toaforeign country within the initial 365-day period, local residents explained.
Previously, people had to go to the former capital of Rangoon and the new capital city of Naypyitaw to apply forapassport.
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။
မြန်မာပြည်တွင်း မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက စက်မှုဇုန်အလိုက် ကားပစ္စည်းများ ပြန်လည်တင်သွင်းခွင့် ပြုလိုက်သည်။
“စက်မှုဇုန်တွေအလိုက် ကားပစ္စည်းတင်သွင်းမယ့် ကုမ္ပဏီတွေ စာရင်းပေးလျှောက်ထားကြပါ။ သူ ခွင့်ပြုပေးပါ့မယ်လို့ စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးက ဒီလ ၁၂ ရက်နေ့က ပြောပါတယ်” ဟု မန္တလေး စက်မှုဇုန်မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ပြည်တွင်း ကားထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းမှာ အင်ဂျင်၊ ဂီယာ၊ ရေတိုင်ကီ အပါအဝင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပမှ မှာယူတင်သွင်းရပြီး စက်မှုဇုန်များတွင် ဘော်ဒီပိုင်း၊ ခေါင်းနှင့် ဖရိန်ကိုသာ လုပ်ဆောင်တပ်ဆင်ကြသည်။
လတ်တလော ပြည်တွင်း တပ်ဆင်ယာဉ်များတွင် ကုန်တင်ယာဉ်ငယ် ထုတ်လုပ်မှုသာ အလုပ် အနည်းငယ် ဖြစ်နေပြီး၊ ဂျစ်ကားထုတ်လုပ်မှုမှာ ရပ်ဆိုင်းလုနီးပါး ဖြစ်နေရာမှ မူဝါဒအသစ် ထုတ်ပြန်လာပြီဖြစ်သဖြင့် ကား ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းသည် ပြန်လည် လည်ပတ်နိုင်မည်ဟု ကားတပ်ဆင် ထုတ်လုပ်သူများက ခန့်မှန်းကြသည်။
KM ကားထုတ်လုပ်ရေးမှ ဦးကျော်မြင့်က ''လိုက်ထရပ် ၁၀၀ ထုတ်မယ်ဆိုရင် ဂျစ်ကား ၅ စီးလောက်ပဲ ပါတော့တယ်။ ဈေးကွက်ကလည်း လိုက်ထရပ်ကို ပိုကြိုက်တယ်။ အခု မူ ပြင်လိုက်တဲ့ အခါကျတော့ ကျနော်တို့ ဂျစ်ကားကို ထုတ်သင့်ရင် ပြန်ထုတ်မှာပါ'' ဟု ဆိုသည်။
ယခုအခါ ပြည်တွင်း ကားတပ်ဆင် ထုတ်လုပ်သည့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မုံရွာနှင့် တောင်ကြီး စက်မှုဇုန်များအလိုက် ကားပစ္စည်း တင်သွင်းခွင့်ကို လျှောက်ထားခွင့် ရပြီဖြစ်သဖြင့် စက်မှုဇုန်များအလိုက် ဆွေးနွေးနေကြကြောင်း သိရသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြန်အောင်မြို့နယ်တွင် လောင်းကစားလုပ်ငန်းကို ကျယ်ပြန့်စွာ လုပ်ဆောင်နေ
.ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြန်အောင်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအာဏာပိုင်များကိုယ်တိုင် ဦးစီးကာ လောင်းကစားလုပ်ငန်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်နေလျှက်ရှိသည်။
နောက်ဆိုရင် မြန်မာဘောလုံးပွဲ တရားဝင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လောင်းကစား ရတော့မှာပါ။ ။
မြောက်ကိုရီးယား သမ္မတ ကင်ဂျုံအီးလ် (Kim Jong-il) ဟာ ပန်းခရီယကင်ဆာ (Pancreatic Cancer) ရောဂါ ခံစားနေရပြီး စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေတယ်လို့ တောင်ကိုရီးယား ယွန်ဟပ် ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းဌာန (YTN) က ဒီနေ့ ကြေညာပါတယ်။
ဒီသတင်းကို spy တွေ က အတည်ပြုဖို. ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ။
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:24 AM No comments:
.ဘိန်းဖြူ ကီလို ဂရမ် ၁၀၀၀ ခန့်နှင့် မက်သာ အဖက်တမင်းဆေးပြား ၃ သိန်း ၄ သောင်းခန့် သယ်ဆောင်လာသော ကုန်တင်ကား တစီးကို ကားမောင်းသူ အပါအဝင် လူ ၃ ဦးနှင့်အတူ ပြီးခဲ့သည့် သောကြာနေ့က ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် တာချီလိတ် မြို့အဝင် လွယ်တော်ခမ်း စစ်ဆေးရေး ဂိတ်တွင် ဖမ်းဆီးမိကြောင်း သိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ဘိန်းခင်းတခင်းတွင် ဘိန်းခြစ်ယူနေပုံ (ဓာတ်ပုံ - KADAC)
ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်အတွင်းရှိ မျောက်ရော လူများမှာပါ တီဘီရောဂါ ကူးစက်ပျံ့နှံ့
Posted by ငဝန်နဒီ at 1:33 PM2comments:
Japan's PM under pressure after key vote lost
Taro Aso is facing increasing pressure within his party to step aside before elections
Pressure comes after his party lostakey vote in Tokyo
Aso's Liberal Democratic Party lost its majority in the Tokyo Metropolitan Assembly
Kyodo says he plans to dissolve Diet's lower house Tuesday, call for new elections
(CNN) -- Japanese Prime Minister Taro Aso is facing increasing pressure within his party to step aside before national elections after his party lostakey vote in Tokyo on Sunday.
Japanese Prime Minister Taro Aso said the Tokyo election would have no effect on the national vote.
Aso's Liberal Democratic Party lost its majority in the Tokyo Metropolitan Assembly as the opposition Democratic Party of Japan made the largest gains.
The LDP won 38 seats, down from 48. Its coalition partner, the New Komeito Party, won 23.
The opposition boosted its numbers from 34 to 54 representatives in the assembly. The results mean the LDP loses its decisive majority previously held along with the New Komeito Party.
Speculation now centers on how the Tokyo vote will affect the national election, which must be held by the end of October.
Aso said the Tokyo election would have no effect on the national vote, but Japan's Kyodo news agency said Monday that he plans to dissolve the Diet's lower house Tuesday and call for new
Posted by ငဝန်နဒီ at 1:31 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၀က်တုပ်ကွေး ကူးစက်သူ နောက်တဦး တွေ့
မြန်မာနိုင်ငံမှာ A H1N1 ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစား ၀က်တုပ်ကွေး ရောဂါပိုး ကူးစက်သူ နောက်တယောက် ထပ်တွေ့တယ်လို့ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနက အတည်ပြု ပြောဆိုပါတယ်။ အခုတွေ့တဲ့လူနာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရှိတဲ့ ဒုတိယမြောက် လူနာဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးပါမယ်။
အခု ရောပိုး ကူးစက်ခံရသူဟာ ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ပြီးခဲ့တဲ့ ဂျူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့က ပြန်လာတဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ် အမျိုးသား တဦး ဖြစ်တယ်လို့ စစ်အစိုးရ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အခုလို ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါပိုး ကူးစက်တဲ့လူနာ နောက်တဦး ထပ်တွေ့တယ်ဆိုတာ မှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနရုံးက ၀န်ထမ်း တဦးက အတည်ပြု ပြောဆိုပါတယ်။
“ဟုတ်ပါတယ်။ မှန်ပါတယ်ရှင်။ ကျမတို့ ၀န်ကြီးဌာနက အတည်ပြုပြီးတော့ သွားတာပါရှင်။ အဲဒီကလေးကတော့ ဘန်ကောက်က ပြန်လာတာပါ။ သူ့ကို ဆေးကုသမှု ပေးနေပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်လာကြတဲ့ ခရီးသည်တွေမှာ ရောဂါပိုး ပါမပါ သိရှိနိုင်အောင် အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာတွေနဲ့ တိုင်းတဲ့ အပြင် သူတို့ ဘယ်နိုင်ငံက လာတယ် ဆိုတဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ကိုလည်း စစ်ဆေးတဲ့အကြောင်း အဲဒီ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ထမ်းက ဆက်ပြောပြပါတယ်။
“လေဆိပ်မှာ ၀င်လာတဲ့ခရီးသည်တိုင်းကို အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာ နဲ့ တိုင်းပါတယ်။ ဒါကတော့ Airport arrival မှာ တိုင်းပါ တယ်။ ရောက်လာတဲ့ ခရီးသည် အကုန်လုံးကိုလည်း လေယာဉ်ပေါ်မှာကတည်းကိုက ကျမတို့ Health Declaration Form ဖြည့်ခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီမှာ လိုချင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ အကုန်လုံးကို သူတို့ကို တုပ်ကွေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရှိမရှိ ရယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဘယ်နိုင်ငံက လာသလဲ၊ ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့ နိုင်ငံကလာတာ ဟုတ်မဟုတ် အချက်အလက်တွေ ရယူပါတယ်။”
အရင် စင်္ကာပူက ပြန်လာတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးတုန်းကတော့ အဲဒီ အပူချိန်တိုင်းစက်တွေနဲ့ တိုင်းတာတဲ့အခါမှာ မတွေ့ရဘဲ နောက်ပိုင်း တရက် ၂ ရက်လောက်ကြာမှ ရောဂါပိုး ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း သူက -
“ဒါကတော့ ရှိတယ်လေ။ ရောဂါ တိုးချိန် ဆိုတာ ရှိတယ်လေ။ ကြားအချိန်မှာတော့ မပေါ်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရောဂါပိုး ဖြစ်ပြီး ၅ ရက်၊ ၆ ရက်၊ ၇ ရက်လောက်နေမှ ပေါ်လာတဲ့ လက္ခဏာတွေပေါ့။ ဒါကြောင့်ပါ။ စက်ကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ အကုန်လုံး ကျမတို့ပေါ့နော်။ ဒီ နယ်စပ် ဧရိယာမှာ စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုနေပါတယ်။ ဒီရောဂါ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့။”
ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက လေဆိပ်တွေ၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်တွေမှာ ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါရှိမရှိ စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေတာက ဘယ်လောက် ကျယ်ပြန့်ပြီး ထိရောက်မှုရှိပါသလဲ။ အာဏာပိုင်တွေဘက်က ဘယ်လောက်ထိ သေသေချာချာ စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေပါသလဲ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် လူထု ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဒေါက်တာ သီဟမောင်ကတော့ -
“သူတို့ လုပ်သင့်တွေတော့ လုပ်တယ်ခင်ဗျ။ ဒါပေမယ့် တခုရှိတာက Cross Border Check Point တွေမှာ ဘယ်လောက် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်သလဲ ဆိုတာကတော့ တိတိကျကျ ကျနော်တို့ မသိရဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် အခု ကူးစက်ရောဂါ တွေ ဖြစ်ရင်တော့ အများအားဖြင့်က Cross Border Point တွေမှာ ဂရုမစိုက်လို့ရှိရင် ပြဿနာ ပိုပြီးတော့ ကြီးထွားတတ် ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ အဲဒီ Border Check Point တွေကို လေဆိပ် အ၀င်အထွက်တွေမှာ လုပ်တာဟာ အထူးဂရုစိုက် ဖို့ လိုပါတယ်။”
မြန်မာ့အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာတင် ဒီ ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါပိုးကြောင့် အခုချိန်ထိ သေဆုံးသူ ၁၄ ယောက်၊ ရောဂါပိုး ကူးစက်နေသူ ၃,၀၀၀ ကျော် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ထိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံက ရောဂါပိုး ကူးစက်မှုနှုန်းဟာ အခုချိန်မှာ တဖြည်းဖြည်း မြန်ဆန်လာနေတယ်လို့ ဒေါက်တာ သီဟမောင်က ပြောပြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ထိုင်းအစိုးရက လူငယ်တွေစုဝေးရာ နေရာတွေဖြစ်တဲ့ စာသင်ကျောင်း၊ ကျူရှင်နဲ့ ဗွီဒီယို ဂိမ်းစ် ကစားတဲ့ နေရာ တွေကို သီတင်း နှစ်ပတ်တိတိ ပိတ်ထားဖို့ အမိန့် ထုတ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တကယ်တော့ ကူးစက်ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားပြီဆိုရင် ဖြစ်တဲ့လူထုက သတင်းပို့မှသာ အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ သိနိုင်တာမို့ တကယ် ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့ အရေအတွက်ကို သိနိုင်ဖို့က ခဲယဉ်းတယ်လို့ ဒေါက်တာ သီဟမောင်က ထောက်ပြပါတယ်။
“ကူးစက်ရောဂါတွေ ဖြစ်ပြီဆိုရင် အများသောအားဖြင့် ကျနော်တို့က တကယ့်အဖြစ်မှန် အခြေအနေကို အတိအကျ သတင်း ရဖို့ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီ ကူးစက်ရောဂါတွေ ဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဆေးရုံဆေးခန်း ကျန်းမာရေးဌာနတွေကို လာပြီး သတင်းပို့တဲ့သူကိုသာလျင် ကျနော်တို့က အတည်ပြုနိုင်ပြီးတော့ အပြင်လောကမှာ တကယ့် အဖြစ်အပျက်မှန် အခြေအနေ ဟာ အတိကျ မသိနိုင်ပါဘူး။”
ဒေါက်တာ သီဟမောင် ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:39 PM No comments:
အိုဘားမား အာဖရိက ပထမဆုံး ခရီးစဉ်အဖြစ် ဂါနာနိုင်ငံရောက်ရှိ
အာဖရိကတိုက်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ကမ္ဘာရဲ့ အနာဂတ် အတွက် ဒီမိုကရေစီရေး အခွင့်အလမ်း၊ ကျန်းမာရေး နဲ့ ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းရေးတို့ အဓိက ကျတယ်လို့ သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမားက ဂါနာ ပါလီမန် မှာ စနေနေ့က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အက်ကရာ မြို့ ဂါနာ ပါလီမန်မှာ လွှတ်တော်အမတ်များ တခြား အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များ အား မိန့်ကြားတဲ့ မိန့်ခွန်းထဲမှာ သမ္မတ အိုဘားမားက သူ့အစိုးရရဲ့ အာဖရိကတိုက် ဆိုင်ရာ မူဝါဒ သဘောထားများကို တင်ပြသွားပါတယ်။ ဂါနာ နဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံတို့ရဲ့ မဟာမိတ်ဖြစ်ရေး အခြေခံ အပြန်အလှန် တာဝန်ယူရလိမ့်မယ်လို့လည်း သမ္မတ အိုဘားမား က ထောက်ပြသွားပါတယ်။
အာဖရိကတိုက်မှာ ငှက်ဖျားရောဂါ၊ ပိုလီယို ရောဂါ၊ တီဘီ အဆုတ်နာ ရောဂါနဲ့ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါများ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် သူ့အစိုးရက ဒေါ်လာ ၆၃ ဘီလီယံ ပေးသွားမယ်လို့လည်း သမ္မတ အိုဘားမား က ကတိပြု ပြောဆိုသွားပါတယ်။
အာဖရိကတိုက်ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ အာဖရိကတိုက်သား များ အပေါ်မှာသာ မူတည်ပါတယ်လို့လည်း သမ္မတ အိုဘားမား က ပြောဆိုသွားပါတယ်။
ထိုင်းလူမျိုး ၁၂၀၀ ခန့် A(H1N1) တုတ်ကွေးကြောင့် သေကြေပျက်စီးနိုင်ပြီး ၃ နှစ်အတွင်း လူဦးရေ သန်း ၃၀ ခန့် ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်သည်ဟုဆို
.ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း A(H1N1) ကြောင့် သေဆုံးသူ ယမန်နေ့ကအထိ ၁၅ ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပြီး ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသသူများအနက် လူ ၃၀,၀၀၀ မှ ၁၃၀,၀၀၀ ထိ ဗိုင်းရပ်ရောဂါပိုး ဖြစ်ပွားတွေ့ရှိရကြောင်း A(H1N1) ရောဂါပိုး ဖြစ်ပွားမှုကို စောင့်ကြည့်နေသော ဝန်ကြီးဌာန၏ ဆပ်ကော်မတီဥက္ကဌ ပရာဆပ်သွန်ချာရိုရန်က ပြောကြားလိုက်သည်။
၎င်းကိန်းဂဏန်း အရေအတွက်သည် လွန်ခဲ့သော တနှစ်မှ သုံးနှစ်အတွင်း တွေ့ရှိမှုများ၏ ခန့်မှန်းခြေကို အခြေခံ၍ ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ထုတ် ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယခုနောက်ဆုံး A(H1N1) ကြောင့် သေဆုံးသူမှာ စမတ်ပရာကန်ခရိုင်မှ အသက် (၆၃) နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး ကျောက်ကပ်ပျက်စီးကာ သွေးလည်ပတ်မှုများပျက်စီး၍ သေဆုံးရခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ ပရာဆပ်က ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို မည်ကဲ့သို့ ကာကွယ်တာဆီးရမည်နှင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု တာဆီးခြင်းများကို ပညာပေးပြောဆိုရန် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား အကြံပြု ပြောဆိုထားသည်။
“လူထုစည်းရုံးရေးနဲ့ကျန်းမာရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူများအနေနဲ့ A(H1N1) ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုနှုန်း ပပျောက်ဖို့အထိ လျှော့ချနိုင်အောင် ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ အစီအစဉ်ဆွဲ လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်” ဟု ဒေါက်တာ ပရာဆပ်က ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ချွမ်လိပိုင်က ၎င်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရပ်တန့်ရေး ဆွေးနွေးရန် ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများ၊ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ၊ ချူလာလောင်ကွန်တက္ကသိုလ်၊ မဟီရောဒ်တက္ကသိုလ်နှင့် ရာမက်သီဗိုဒီဆေးရုံ အပါအဝင် ဆေးရုံနှင့် ဆေးကျောင်းများမှ ရောဂါဗေဒ ကျွမ်းကျင်သူများကို ယနေ့ အစည်းအဝေးခေါ်ခဲ့သည်။
တဆက်တည်းမှာပင် ရောဂါထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရ၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုသည် အလွန်နှေးကွေးကြောင်း ပြည်သူလူထု၏ ဝေဖန်သံများ ပေါ်ထွက်နေလျှက်ရှိသည်။
ရောဂါထိန်းချုပ်မှုဌာနမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကမ်နျူအန် အန်ချူဆပ်က ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အဆင့် (၂) နေရာတွင် ဖလူးရောဂါဖြစ်ပွားကူးစက်မှု စုစုပေါင်း၏ ၀.၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် သေကြေပျက်စီးမှုရှိသည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းခန့်မှန်းချက်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ရောဂါဖြစ်ပွားကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်ရေးဌာန စာရင်းဇယားများအရ ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ကာ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနအဆိုအရ သေဆုံးမှုတွင် အဆင့် (၅) နေရာတွင် ရှိသည်။
“အဆင့် (၂) မှာ ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေအနေနဲ့ ပြည်သူလူထုကို လူစည်ကားရာနေရာတွေကို ရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့ အခြား သတိပေးကြေညာချက်တွေ ထုတ်ပြန်ရလိမ့်မယ်” ဟု ကမ်နျူအန် အန်ချူဆပ်က ပြောသည်။
သေဆုံးမှုနှုန်း (၀.၅) မှ (၁) ရာနှုန်းနှင့်အထက် အသေအပျောက်ရှိသော အဆင့် (၃) နေရာများတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး လွယ်ကူစွာ ကူးစက်နိုင်သော အများပြည်သူနေထိုင်သည့် နေရာများကို ထိန်းချုပ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
အသေအပျောက် (၂) ရာခိုင်နှုန်းအထက်ရှိဖြစ်သော အဆင့် (၅) နေရာများကို သွားလာမှု တားဆီးပိတ်ပင်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းစာတွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။
အမျိုးသား တုတ်ကွေးရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးဌာန ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဆန်နန်ချော်ပရာဆပ်က A(H1N1) ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဘတ်သန်း ၇၀ ရရှိရေးအတွက် အစိုးရကက်ဘိနက်သို့ တင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
လူစည်ကားရာနေရာများဖြစ်သည့် စီးပွားရေးဈေးကွက်များတွင် အဆိုပါ တုတ်ကွေးကူးစက်မှု များစွာ ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိပြီး Siam Piwat ကုမ္ပဏီ ဒုဥက္ကဌ ဝိချာဟန်က A(H1N1) ရောဂါပိုးသည် Siam Paragon, Siam Discovery နှင့် Siam Center အရောင်းစင်တာ ၃ ခုကို ဖြတ်၍ ပြန့်ပွားလျက်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ၏ ဈေးဝယ်မှုနှုန်းသည် ဖလူးရောဂါနှင့် စီးပွားရေး အကြပ်အတည်းများကြောင့် ထက်ဝက်ခန့် ကျဆင်းသွားပြီး လက်ရှိအားဖြင့် ၎င်းအရောင်းစင်တာ ၃ ခုတွင် နိုင်ငံခြားသား ဈေးဝယ်သူ (၄၀) ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိသည်။
“နောက်ထပ် ပြည်တွင်းက ဈေးဝယ်သူတွေပါ လျှော့နည်းသွားတာကို တွေ့ရနိုင်တယ်၊ အခုဆိုရင် နောက်အပတ်ကစပြီး ကျူရှင်ကျောင်းတွေ ၁၅ ရက်ပိတ်မယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက အမိန့်ထုတ်ထားတယ်” ဟု Siam Piwat ကုမ္ပဏီ ဒုဥက္ကဌ ဝိချာဟန်က ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီး ယူရင်လက်ဆန်နာဗီဆစ်က ဘာသာဗေဒကျောင်းများနှင့် ကျူရှင်ကျောင်းများကို ၂ ပတ် ပိတ်ထားမည်ဟု ဆိုသည်။
တနိုင်ငံလုံး ပုဂ္ဂလိက ကျူရှင်ကျောင်းနှင့် ဘာသာဗေဒကျောင်း ၂,၃၁၀ ကို လာမည့်တနင်္လာနေ့မှစ၍ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်ထိ ပိတ်ထားမည်ဖြစ်သည်ဟုပြောသည်။
ယခုလအတွင်း စစ်ဆေးမည့် GAT နှင့် PAT စာမေးပွဲများကိုလည်း အစီအစဉ်မှ ရွှေ့ဆိုင်းဖို့ရှိသည်ဟု ပညာရေးဝန်ကြီး မစ္စတာယူရင်က ပြောသည်။
ထိုင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ ဒုတိယဥက္ကဌ ပနစ်ဆိုရပ်က A(H1N1) ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကြောင့် စီးပွားရေး ထိခိုက်နစ်နာမှုသည် ယခင်က (၂) မှ (၃) ရာခိုင်နှုန်း ခန့်မှန်းသော်လည်း ယခု တတိယလေးလပတ်တွင် (၄) မှ (၅) ရာခိုင်နှုန်းထိ တိုးလာသည်ဟု ပြောသည်။
သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ဝန်ကြီး ရနောင်းရပ် ဆူဝန်ချဝီးက အင်တာနက်ကဖီးနှင့် ဂိမ်းဆိုင်များကိုလည်း ယာယီပိတ်ထားကြရန် တိုက်တွန်းထားလိုက်သည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က သွေးမြေကျခဲ့ရတဲ့ အထိ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ရှင်ဂျန်း ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော် အူရုမ်းချီး (Urumqi) မှာ ၀တ်စုံပြည့် လုံထိန်းရဲတွေ အပြည့်တင်ဆောင်ထားတဲ့ ထရပ်ကားတွေနဲ့ လုံခြုံရေးကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ချထားတာကြောင့် ဒေသခံ ၀ီဂါ မူစလင်တွေ အပြင်မထွက်ရဲဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
တချို့ကတော့ သေဆုံးသွားတဲ့ သူတို့ရဲ့ဆွေးမျိုးသားချင်းတွေ အတွက် ၀မ်းနည်းပူဆွေးနေကြသလို၊ တချို့က ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ဆွေးမျိုးတွေကို လိုက်ရှာနေကြပါတယ်။ ရှင်ဂျန်းက ၀ီဂါမူဆလင်နဲ့ ဟန် တရုတ်လူမျိုးတို့ အကြား အဓိကရုဏ်းမှာ သေဆုံးသူဦးရေ ၁၅၇ ဦးကနေ ၁၈၄ ဦး ရှိခဲ့တယ်လို့ တရုတ်အစိုးရက တရားဝင် ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် မနေ့က မြို့တော် အူရုမ်းချီး မှာ လုံခြုံရေးတွေ အလုံးအရင်း နဲ့ အထပ်ထပ် ချထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သေဆုံးသူအားလုံး ၁၈၄ ဦးထဲက ၁၃၇ ဦးဟာ ဟန်တရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီး၊ ကျန်တာကသာ ၀ီဂါ မူစလင်တွေ ဖြစ်တယ်လို့ တရုတ်အစိုးရက ပြောပါတယ်။
အူရုမ်းချီး မြို့တော်က လမ်းမတွေပေါ်က ၀ီဂါတွေနဲ့ အဝေးရောက် ၀ီဂါ အရေး လှုပ်ရှားသူတွေ ကတော့ တရုတ်အစိုးရရဲ့ ကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စောဒက တက်နေကြပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရပြောတာထက် ၀ီဂါမူစလင်တွေ အများကြီး သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ သူတို့က ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်မှာ ၀ီဂါ မူစလင်တွေက ဟန်တရုတ်လူမျိုးတွေကို အရင် ရန်စတာကြောင့် ရုန်းရင်းဆံခတ်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ရက်အကြာမှာ ဟန်တရုတ်လူမျိုးတွေက ၀ီဂါတွေကို ပြန်ကလှည့်စားချေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Obama Looks To Future And The Past
Aside from the politics, President Obama's visit to Ghana in Africa is also an intensely personal trip. He visitedaformer jail where, 200 years ago, tens of thousands of slaves were sent to America. Emma Hurd reports.
Posted by ငဝန်နဒီ at 2:58 AM No comments:
Obama: 'Africa Must Strengthen Democracy'
US President Barack Obama has said Africa isakey part of "our interconnected world" - but must strengthen democracy and fight corruption.
Posted by ငဝန်နဒီ at 2:49 AM No comments:
Iranians protest on the 10th anniversary of the raids at the University of Tehran. CNN's Ali Velshi and Reza Sayah report.
• Iran Election Fallout: News & Videos about Iran Election
Posted by ငဝန်နဒီ at 2:46 AM No comments:
In Depth: World's Most Expensive Cities To
Posted by ငဝန်နဒီ at 2:15 PM No comments:
ကုလဆိုင်ရာ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ကို ဘန်ကီမွန်း ခေါ်တွေ...
နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှု ...
တရုတ်ကုန်များ ပိတ်ပင်သဖြင့် နယ်စပ် ကားပြေးဆွဲမှု ထက...
Credit Card နှင့် ATM မြန်မာပြည်မှာ တကယ် သုံးလို့ ...
Credit Card ဆိုလို့မြန်မာမေဖလားဝါး ATM ကဒ်ခဏပဲသု...
နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်း ရေးဆုရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သဘော...
ဂျပန်ကားဟောင်းများ မြန်မာပြည် တင်သွင်းမှုပိုမိုများ...
စားအုန်းဆီကို မလေးရှားက သွင်းနေတာ ဦးပိုင်ကပါ။အဆိပ...
ငွေကြေးမတတ်နိုင်သဖြင့် ကျောင်းသားထက်ဝက်ခန့် ကျောင်...
ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြန်အောင်မြို့နယ်တွင် လောင်းကစားလုပ်...
ကင်ဂျုံအီးလ် Pancreatic ကင်ဆာ ဖြစ်နေကြောင်း သတင်းထ...
အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရက် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ေ...
ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်အတွင်းရှိ မျောက်ရော လူများမှာ...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၀က်တုပ်ကွေး ကူးစက်သူ နောက်တဦး တေ...
အိုဘားမား အာဖရိက ပထမဆုံး ခရီးစဉ်အဖြစ် ဂါနာနိုင်ငံေ...
ထိုင်းလူမျိုး ၁၂၀၀ ခန့် A(H1N1) တုတ်ကွေးကြောင့် သေ...
World's Most Expensive Cities To Live By Sarah L...
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း နာရေးသတင်းထွ...
Anger seething in Urumqi
Jackson casket enters memorial
Richie sings for Jackson
Tension high in China
800 injured in China riots
Violence erupts in China
Zelaya landing blocked
Myanmar's history of sanctions
‘’မြန်မာသည် အထီးကျန် မဟုတ်ပါ’’ (ဘန်ကီမွန်း၏ မိန့်ခ...
မြန်မာ စစ်အစိုးရကို အထီးကျန် ဖြစ်မည်
Kang Nam 1 သူ့နိုင်ငံဆိပ်ကမ်းကို ပြန်ရောက်သွားပြီ
တရုတ်နိုင်ငံ ရှင်ဂျန်းပြည်နယ် မငြိမ်သက်မှု အမေရိကန...
မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့ တရုတ် ရှင်ဂျန်းပြည်နယ် နေ၀င်မီ...
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး
Takao Yama(TAKAO တောင် )
အင်တာနက်ပေါ်က ပညာဒါန(သို့မဟုတ်)Open Course Ware
ရင်ဘတ် သူရဲကောင်း (ပေါ့ပ်ဂီတ ဘုရင် မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်...
မြောက်ပိုင်းမှ ရန်စောင်နေမှုတွင် တရုတ်တို့ အဓိက အခန...